यी तीन मध्ये कसलाई मान्ने ‘राष्ट्रिय दाजु भाउजु’? – Medianp
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, असार २८, २०७५१४:३१0
काठमाडौँ,२८ असार । नेपाली कला क्षेत्रमा चर्चित यी तीन जोडी जति चर्चामा रहेका छन्, त्यति नै आ आफ्नो क्षेत्रबाट नेपाली समुदायको लागि उतिकै योग्दान रहेको छ । प्रेम बिवाह गरेका ती तीनै जना जोडी भनेपछि धेरैले अनुमान लगाउँनु भयो होला । हो हामी कुरा गर्देछौँ महा नायक राजेश हमाल मधु भट्टराई , सिताराम कट्टेल कुञ्जना घिमिरे र निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्काको बारेमा । यी जोडीको कलाकारीता क्षेत्रमा नै सक्रिय रहेको जोडी हमालकी पत्नी मधु बाहेक ।
एउटै क्षेत्र भएपनि आ–आफनै तरिकाले योगदान दिईरहेका छन् यी जोडीहरु । यद्धपी महानायक राजेश हमाल भने हाललाई चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय छैनन् । यो दर्शकको माया नै होल की यी तीन जोडीलाई नेपालीहरुले राष्ट्रीय दाईभाउजुको उपनाम दिएका छन् । तर कतिपयले राष्ट्रीय दाईभाउजुको नाम राजेशदम्पती र निश्चल दम्पतीलाई नभई धुर्मुस सुन्तलीलाई दिनु पर्ने धारणा राख्ने गरेका छन् हुनत यी सबैले आ आफनो तरिकाले योगदान दिएका छन् ।
तर जनमानसमा धुर्मुस सुन्तलीप्रतिको सम्मान बढि भएको कारणले नै होला उनीहरुलाई मात्र यो सम्मान जानु पर्ने तर्क राख्छन् । राजेश हमालले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिएका छन् तर उनी हाल निष्क्रिय नै छन् । उनले चलचित्र क्षेत्रलाई निरन्तरता दिँदै निर्देशन गर्ने कुरा पनि छ भने हालै उनी एक चलचित्रमा अनुबन्धित पनि भएका छन् ।
आफनो ज्यानसमेत जोखिम मोलेर उद्धारका लागि खटिएका धुर्मुुस सुन्तलीको हरेक पाईलमा नेपालीहरुले आशिर्वाद दिए भने हालै विर अस्पतालको मुहार पेर्ने अभियान्ता बनेका उनीहरुको चौतर्फी वाहवाही नै भयो ।
उनीहरुले गरेका कामहरुबाट पुन निर्माण प्राधिकरण र सरकारले समेत सिक्नु पर्ने आवाजहरु उठे । यसरी हेर्दा यी तीनै जोडी नेपालीहरुको मन मुटसुंग नजिक छन् । धुर्मस सुन्तलीको काम त उच्च सगरमाथा जस्तै छ तर बाँकीको योगदानलाई पनि नर्कान सायदै मिल्ला । तर पनि राष्ट्रीय दाईभाउजुको उपाधी भने कसलाई उपयुक्त होला छुट्टाउँने जिम्मा भने तपाई कै ।
उता डुबिसकेको नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई फेरी सास हाल्ने काम गरेका हुन् निर्माता, निर्देशक , कलाकार, गायक एवं स्क्रिप्ट राईटर निश्चल बस्नेतले । नेपाली रजतपटमा फरक धारका चलचित्रहरु निर्माण गर्ने परिपाटी बसालेका निश्चल र नायिका स्वस्तिमा ख्डका आफना दर्शकहरुलाई पर्दामार्फत साथ दिईरहेका छन् ।
यसैगरी आफनो कलाकारीतासंगै सामाजिक सेवामा समर्पित भएका जोडी धुर्मुस सुन्तली विनासकारी भुकम्पपछि नमुना बस्ती निर्माणका लागि अहोरात्र खटिए । धेरै घरबार बिहीनहरुका लागि भगवान बनेका यो जोडी बाढी पिडीत होस या मुसहर बस्ती सबैको दुखमा दिनरात खटिए ।
किन भाइरल भयो यी महिलाको तस्वीर ? यस्तो छ वास्तविक रहस्य !
यस्ता भए शिव श्रेष्ठका साना छोरा, श्रीमतीसँगको सम्बन्धबारे सोध्दा तर्किए शिव
यी हुन् धेरै उमेर ग्याप भएका १० नेपाली सेलिब्रेटीका जोडी
धोकेवाज अभिनेता अभिनेत्रीको सूचीमा परे सलमानदेखि कट्रिनासम्म, हेरौँ कसले कस्लाई दिएका थिए धोका